Doorsisi meeshaa waraanaanii fi humni ittisaa gaaffii ummataa ukkaamsee hambisuu hin dandahu – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooDoorsisi meeshaa waraanaanii fi humni ittisaa gaaffii ummataa ukkaamsee hambisuu hin dandahu
Doorsisi meeshaa waraanaanii fi humni ittisaa gaaffii ummataa ukkaamsee hambisuu hin dandahu.
Yeroo ammaa deeggersa siyaasaa dhabee kisaaraa siyaasaa fi kufaatii keessa kan jiru murni pp,diddaa ummata Oromoo fi Ethiopia kaanii of irraa hambsisuuf jecha maloota ammaan dura dhahachaa ture harkatti dhumnaan har’a falaasama ittisa laga Abbayyaan yaada jedhuun ummata Oromoos tahe saboota biyyattii keessa jiranittidibbee tumaa jira.
Ummati Oromoos tahe sabootiin biroo yeroo har’aa kana biyya qaban irra jiraachuu hin andeenye; qotanii, daldalanii, omishanii fi baratanii soda malee jiraachuu hin dandeenye.
Qabeenyi ummata Oromoo, lafti fi albuudni, guutuutti gurguramaa jira;naannooleen lafa Oromoo waa omishuu dandayan martinuu abbootii qabeenyaa biyya alagaa irraa seenanii fi ergamtoota ppfngurguramee dhumaa jira. Oromoon waan nyaatuu fi bakka jiraatu dhabee qe’ee isaa irraa heddumminaan godaanaa jira,humni dargaggoo kanneen biyya ijaaruu dandayanii fi qaroon ilmaanOromoo mana hidhaatti guuramaa jiru,kaan biyyaa arihamaa jira akkasumas dargaggootni hedduun roorroo daangaa darbite ummata isaanii fi biyya isaanii Oromiyaa irraa qolachuuf bosona mana godhatee falmaa hadhawaa gaggeessaa jira.
PPn har’a qumaara siyaasaa taphachaa akka jiru saboota biyyattii keessa jiran irra darbee Addunyaaf ifaadha. Degertoota kooti jedhee Autobusaan kutaalee biyyaa keessaa walitti guuree,durgoo kaffaluun ,T-shirt hojjechiisuun TV isaa fuula dura dhaabuun lallaba qumaara siyaasaa yeroo deemsisaa jiru kanatti bioyyootni Addunyaa balbala Dipploomaasii isaanii murna Abbaa Irree waliin hin qabaannu jechuun cufataa jiranii fi yakkamaan sabaa fi biyya isaa irratti badii dalage akka biyya isaanii hin seenneefis USAn tokko jettee uggura VISA kaayuun qabsoo ummataa wayita deeggaraa jirtu irra geenyee jirra.
yeroo ammaa kana murni abbaa irree Abiyyii Ahimediin durfamu Oromiyaa keessaatti jibba ummatni isaaf qabu irratti mormiin akka kallattiin hin kaaneef guyyaa irraa gara guyyaatti mormiin ummataa gamtaan akka sagalee isaa hin dhageesifanneef ka’u mala bakka jedhu magaalota hedduu handaaraa fi keessa humna waraanaa meeshaa guguddaan eegumsa godhan hedduminaan kuusee Oromoota bahuu fi galuu dhorkaa akka jiru guutuun biyyaa beeka. Ummata akkasitti mirga dubbaanaa fi sochii dhorkee manaa gadi baasee ajjeesuun akka rifatanii sodaadhaan pp deeggaraniif humnaa fi dandeettii qabu kan dhumaa raawwachuutti kan jiru yoo tahu foddaa TV fi miidiyaalee biyya keessaan immoo Abbayyaa xumurree beelaa fi hiyyummaa isin irraa balleessa; jechuun propogandaa dhumaas ololaa jiru.
Dargiin bara isaatti meeshaa ololaa fi gaaffii ummataa kan ittiin cufu lallaba mishoomaa kan inni oofaa ture keessaa tokko, falaasama qonnaa mootummaa kan ammayyaa tahe babal’isuu yaada jedhuun ture. Bakkoota adda addaatti qonnaa mootummaa (Mechanized) tahe babal’isuun beela balleessina, mishooma biyyaas guddifna yaada jedhuun gargaarsa miliyoonotaan biyya alaa irraa guuraa bahe;kun kana tahees ummata Oromoo beelaa fi hiyyummaa irraa hin oolchine. Dargiis ammoo aduunyaa irraa sadaqaa kadhachuu fi guuruu isa hin oolchine.
Imaamati Dargii yerosii Qonnaan ammayyaa beela balleessee ummata quubsa yaadi jedhu dhugaa irraa kan fagaatee fi tooftaa siyaasaa Dargii tahuun yeroo irratti beekamu battala toftaa siyaasaa jijjirruun falaasama qubsuma ummataa(mender misreta) ijaaruun baadiyyaa magaaleessuu yaada jedhuun biyya Ethiopia goolee qe’ee ummanni abaabileen irra jiraate diigaa ummata tasgabbii dhorkaa bahe. Lageen gurguddaa humna Electric isinii madisiifna
yaada jedhuun maallaqa gurguddaa ummata irraa fuudhee tasa osoo hojii irra hin oolchiin ummata daran hiyyummaatti hidhee biyyaa bahe.
Doorsisi meeshaa waraanaanii fi humni ittisaa gaaffii ummataa ukkaamsee hambisuuf akka hin dandeenye waggoota muraasa dura biyyoota Arabaa akka biyya Egypt ,Liibiyaa fi Tuunisaa irraatti dhohe biyya keenya keessattis dhohuun Olaantummaa TPLF aangoorraa darbuun murna afaaniin jijjiirama lallabu pp aangootti ol baase irratti kan tahe fincila biyyoolessa arginee jirra.
Biyyi USSR humna jabaa taatee kan addunyaa yaaddoo keessa galchiti jedhamte diddaa ummataan bakka meeqatti ciramtee diigamuu seenaa keessatti kan argamedha.
Mootummaan Wayyaanees kufaatiin akkaanii fi gara malee akka irra gahee sanatti murna Abbaa Irree PP Abiyyiin durfamu irrattis dhuma irratti gahee bilisummaa fi dimokraasiin biyyattii keessatti akka lalisu shakkii tokko hin qabnu.
Dhuma irratti gochaan fi kijibi Abbaa Irree PP har’aa Sochii Dargaggoota Biyyooleessaa(Qeerroo) fi ummata Oromoo qabsoo gaggeessan irraa takkaahuu dhaabuu akka hin dandeenye ummata Oromiyaa fi Ethiopia, akkasumas biyya lafaa beeksifna.
Qabsoon itti fufa ! Gabroomsaan ni Kufa!
Humni Bilxiginnaa qabeenya ummataa ibiddaan gube Humni Bilxiginnaa qabeenya qonnaan bultoota Aanaa Bosot ibiddaan gube.…
Gaaffii fi Deebii miseensota Raayyaa Ittisa Biyyaa Itophiyaa duraanii WBOtti makamanii wajjin taasifame. Itti Aanaa…